Hery Rajaonarimampianina : « Tsy misy ambonin’ny lalàna… ” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tsy misy ambonin’ny lalàna… ”
Tsy nitsitsy fitenenana ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fandikan-dalàna eto amin’ny firenena. Hentitra izy nanambara fa “tsy misy ambonin’ny lalàna izany eto amin’ny tany sy ny firenena. Ny lalàna natao ho an’ny rehetra ary koa natao hampiharina amin’ny tokony ho izy”.
Manoloana ny zava-misy ankehitriny mantsy, indrindra fa ny fisian’ny fitsaram-bahoaka niseho lany tato ho ato, nampitandrina ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny Filoham-pirenena, manomboka amin’ireo mpitsara, mpitandro filaminana, olom-panjakana ambony ary ny vahoaka. Tsy maintsy hisy, hoy izy, ny fanasaziana ireo mandika lalàna sy mihoa-pefy ary tsy handefitra amin’izany mihitsy ny fitondram-panjakana.
Voalazan’ny minisitry ny Fitsarana ihany koa fa anisan’ny tsy atokisan’ny vahoaka ny Fitsarana ny fanaovana fitsara-mitanila sy ny fandikan-dalàna ataon’ireo mpitsara amin’ny alalan’ny kolikoly, sns. Noho izany indrindra, nisy mpitsara miisa dimy nesorina tamin’ny andraikitra sahaniny. Nisy iray tamin’ireo mpitsara manerana ny Nosy ihany koa naato tamin’ny asany.
Izany rehetra izany dia tafiditra indrindra amin’ny fanadiovana ataon’ny fanjakana mba tsy haharatsy endrika ary mba hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana. Nambaran’ny filohan’ny Repoblika mantsy fa anisan’ny tsy mampandroso firenena ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna.
Araka izany, ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny firenena ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao ary manarina ny gaboraraky ny fitondrana Tetezamita tao anatin’ny dimy taona ngarangidina.
Ankoatra izay, raha ny voalaza hatrany, tsy mijanona eo amin’ny sehatry ny Fitsarana ihany anefa ity fanadiovana ity fa hatrany amin’ireo sehatra maro sy andrim-panjakana samihafa ihany koa.
Ny dimy isan-jaton’ny velaran-tany 35 tapitrisa hekitara eto Madagasikara dia mbola azo ambolena sy trandrahina hamokatra avokoa. Raha io no voajary dia ho sompitra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana isika. Manana toho-drano mahavokatra herinaratra mihoatra ny ...Tohiny